Dagaallada dadweynaha ay ku qaadaan al-Shabaab oo bateen
Waayahaan dambe, waxaa bateen dagaallada u dhaxeeya maleeshiyada ururka xag-jirka ah ee al-Shabaab iyo xoola-dhaqatada iskooda is-abaabulay ee la dagaallamaan ururkaas. Xoola-dhaqatada waxay ka soo horjeedaan waxa ururka al-Shabaab ay ugu yeeraan sakada ee ah dhaca cad ay u geystaan dadweynaha.
Toddobaadkii lasoo dhaafay, dagaal xooggan oo u dhaxeeya dad xoola dhaqato ah iyo ururka al-Shabaab ayaa ka dhacay deegaanno hoos yimaada gobolka Hiiraaan.
Iska hor imaadkaan oo ka dhacay tuulooyin hoos yimaada deegaanka Halgan ayaa yimid kadib markii xoola dhaqatada weerar ku qaadeen ururka al-Shabaab oo horay xoola uga dhacay.
Qaar ka mid ah dadka deegaanka ayaa u xaqiijiyay warbaahinta in kun neef oo al-Shabaab horay ay u dhaceen dib looga soo furtay.
Al-Shabaab ayaa la sheegay in markii hore ay xoolahaan u qaateen wax ay ugu yeeraan Zakawaat oo sanad waliba ay ka uruuriyaan deegaannada ay weli ka arrimiyaan.
Ma ahan markii ugu horreysay oo dagaal uu dhex maro xoola dhaqato ka biyo diidsan bixinta Zakawaatka iyo ururka al-Shabaab. Daba-yaqadii bishii lasoo dhaafay ee Maayo sannadkaanna, saraakiil iyo dagaallamayaal ka tirsan kooxda al-Shabaab ayaa la sheegay in lagu dilay dagaal ka dhacay deegaanka Xagarey oo 40kM u jira degmada Cadale ee gobolka Shabeellaha Dhexe.
Kooxda Macawiisley ayaa la sheegay in dagaal gaatin ah ay ku qadeen deegaanka Xagarey oo al-Shabaab ku sugnayeen, waxaana halkaasi dagaal kooban oo khasaaro geystay uu ku dhex maray al-Shabaab iyo Macawiisley.
Dadweynaha Soomaaliyeed ee masaakiinta ah waxay ka daaleen dhibaatooyinka kaga imaanaya dhanka ururka dilaaga ah ee al-Shabaab waxay wacda ku mareen inay iska celiyaan ururkaas.